Igbo, John: Lesson 102 - Jizọs rịọrọ arịrịọ maka ndịozi ya (Jọn 17:6-19) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 102 (Jesus intercedes for his apostles)
9 M na-ekpe ekpere maka ha. Anaghị m ekpe ekpere maka ụwa, kama maka ndị ị nyere m, n'ihi na ha bụ nke gị. 10 Ihe niile nke m bụ nke gị, nke gị bụkwa nke m, a na-enyekwa m otuto n'ime ha.
Ekpere Jizọs bụ maka onye ọ bụla kwere na Chineke bụ Nna, na Ọkpara ya dị n'otu site na ndụ ebighị ebi. N'ebe a n'ekpere ekele ya, Jizọs ekpeghị ekpere maka ụwa dum, ebe ọ bụ na ụmụ mmadụ jụrụ Mmụọ nke Onyenwe anyị, ma kpebie ikpe maka onwe ha. Jizos gosiri ih n'anya na ilekọta Nzuki Ya na ndi ah ho putara nke Chineke. Iso Ụzọ Kraịst aghọtaghị Chọọchị zuru ụwa ọnụ na-ewebata ihe nile a kpọrọ mmadụ, n'ihi na a na-agụkọta Chọọchị nanị nke ọtụtụ ndị kwere ekwe, ndị a họọrọ site na mmadụ nile.
Ya mere, ụka dị iche, họrọ ma dị ọcha, n'ihi na ọ na-anọchite anya mkpụrụ mbụ nke ọnwụ Kraịst.
Jizọs ekwughị na ya nwere ihe onwunwe pụrụ iche maka onwe ya, ma ọ gbara àmà ugboro ugboro na ha bụ ihe pụrụ iche nke Nna ya, ọ bụ ezie na Nna nyere ha ya. Ọkpara ah di n'onod n'obi, wee nyefee onwe ya nye Nna n'ekpere.
Jizos kwetara na enwere ya otuto nime ndi tukwasiri ya obi, ebe ayi nagbasi nkpu na ikwu na Nzuko anyi di ike na ihe ojoo nye Kraist; ọ na-enyocha ihe kariri nke a. Nna ahụ na-ahụ anyị n'ìhè obe. Ọ wụkwasịrị Mmụọ Ya n'ime ndị kwere ekwe site n'aka Ọkpara. Ihe omuma nke ime mmuo a bu ihe akaebe nke ike nke obe. Kraist adighi anwu n'onwu efu, ma Mo Nso di ndu nke ndi kwere ekwe neme nkpuru. Ya mere nmutaghari obula naenye ebube Kraist.
11 Anọkwaghị m n'ụwa, ma ndị a nọ n'ụwa, m na-abịakwutekwa gị. Nna di nsọ, chebe ha n'aha gi nke I nyewo m, ka ha wee buru otu, dika anyi di.
Kraist na alaghachikute Nna ya, kwenyesiri ike na nke a ga-eme, ọ bụ ezie na onye na-arara ya nye na-abịakwute ìgwè ndị agha iji jide ya. Jisos puru ihu kari onwu ya, otuto nke Nna ya, buru amuma, si, "abughm n'uwa", obu ezie na obu n'uwa.
Jizọs weere ụwa dị ka osimiri buru ibu na mmiri ya na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ, na-agbanwe mgbe ụfọdụ ka mmiri na-asọpụta site n'ịdị elu. Christ nọ na-egwu mmiri megide iyi ahụ, ma gbanwee oke mmiri. Ọ maara na ndị na-eso ụzọ ya agaghị achọ ike imegide ihe ọjọọ. N'ihi ya, ọ gwara Nna ya ka o debe ndị ọ hụrụ n'anya n'aha ya.
Na arịrịọ ya, Jizọs ji okwu pụrụ iche "O Nna Nsọ" mee ihe. N'elu ajọ ihe ọjọọ nke ụwa, Ọkpara ahụ gbara àmà maka ịdị nsọ nke Nna, onye zuru okè, onye na-enweghị ntụpọ na onye na-enweghị ntụpọ.
Chineke bụ Nna dị ọcha na dị nsọ. Odidi ya bụ uwe nke ịhụnanya Ya, nke bụ ebube nke ebube Ya.
Ya mere, aha nsọ nke Chineke bu ebe mgbaba ebe ndi neso uzo nechebe onwe ha site na ike nke onye onwunwa. Onye bi na Kraist, bi nime Nna. Onye nānọgide nime Ọkpara ahu, nanọgide nime Nnam. Nna nke Chineke mesiri umu Ya obi ike na O ga edebe ha na nduzi ya na nchedo ya. Setan apụghị ịnapụta ha n'aka Nna m.
Ọnọdụ nke na-ekwenye na nchebe ha bụ na ha adịghị ebi na ịkpọasị na esemokwu, kama ha na-agbaghara kwa ụbọchị na ịhụnanya na-adịgide adịgide. Ịhụnanya a esiteghị n'aka mmadụ n'onwe ya, ma onye ọ bụla nke nọgidere n'ịhụnanya nke Atọ n'Ime Otu dị nsọ na-enweta ike, ndidi na ịhụnanya maka ndị ọzọ. Kraịst gwara Nna ya ka o debe anyị na mkpakọrịta ya, ka anyị na ya nọrọ mgbe niile dịka Ọkpara ahụ dị n'otu na Nna ya: Okwu a abụghị nchịkọta nchịkọta ma ọ bụ nkọwa nkọwa maka mmekọrịta anyị na Chineke, kama ịzaghachi arịrịọ Jizọs site n'aka Nna. Okwukwe anyị adịghị mpako ma ọ bụ ihe omimi; ọ bụ mkpụrụ nke ekpere Jizọs na nhụjuanya ya maka anyị.
12 Mgbe m na ha nọ n'ụwa, m debere ha n'aha gị. Ndị m nyere m ka m debere. O Dighi nime ha furu efu, maob ghi nwa nke mbibi, ka Akw kwo nso wee mezuo. 13 Ma ugbu a, ana m abịakwute gị, m na-ekwu ihe ndị a n'ụwa, ka ha wee nwee ọṅụ m jupụtara n'ime onwe ha.
Site n'inwe ndidi na nghọta Jisos mere ka ndi neso uzo ya ghara idi onwunwa Setan, obu ezie na ha di iche iche. O gwara Pita, "Setan choro ijide gi, mana m kpere ekpere maka gi, ka okwukwe gi daa." Ya mere, okwukwe anyị na-adịgide ndụ n'ihi ịrịọchite ọnụ ya, ma a na-azọpụta anyị naanị site na amara.
Uzo a nke ime ka ndi soro ya wezuga onwe ya n'ebe Judas no maka nrara ya nye Mo nke mbibi na iguzogide Mo nke eziokwu. Ọ ghọrọ nwa nke ila n'iyi. Nna anyị nke eluigwe anaghị amanye onye ọ bụla ka ọ nata onyinye. Ọ maara ihe dị n'obi ndị mmadụ na ihe ndị mere n'oge gara aga, nke mere na e dekọrọ Judas na Agba Ochie otu puku afọ tupu ya emee. Ka o sina dị, Judas nọgidere na-ahụ maka ịjụ nchegbu nke Kraịst maka ya. Chineke anyi di ike abughi onye ochichi ma obu Nna maara ihe; otu akụkụ nke ịhụnanya ya bụ onyinye nke nnwere onwe nye ụmụ mmadụ, dịka ndị nna nke ụwa kwere ka ụmụ ha tozuru okè nweere onwe ha ibu ọrụ.
Jizọs hụrụ ụzọ ya n'ebe Nna ahụ nọ dị ka ìhè dị n'etiti ọchịchịrị. Setan, ma ọ bụ nmehie, ma ọ bụ ọnwụ apụghị igbochi ịlaghachikwute Chineke. Ọkpara ahụ dị nsọ mgbe nile, ọ bụkwa ya mere ọṅụ ji jujuo ya. Mmehie emeghị ka akọ na uche ya dị ọcha. Egwu adịghị ekpuchi ekpere ya. Nna ya nwere nnwere onwe na nchebe site n'aka Nna ya, na-erubere ya isi mgbe nile. Chineke anyị bụ Onye ọṅụ na obi ụtọ. Jizos rịoro Nna Ya kao br na obioma nke Chineke wee mee ka obi nke ndi náeso zoya bia. O choghi ka ndi neso uzo ya na-eru uju, kama o choro ka ha juputa na obi uto na obi uto, ka obi uto nke eluigwe wee buru ha, n'agbanyeghi na ha no n'etiti ochichi na obi nkoropu uwa. Ọṅụ maka mgbaghara na ekele maka ọnọdụ anyị n'ime ezinụlọ Chineke bụ mkpụrụ nke arịrịọ Kraịst maka anyị.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, ekele gị maka ịrịọchitere gị na Nna anyị. Anyị na-eto gị maka ịme ka anyị nwee okwukwe site n'ekpere gị maka anyị. Anyị na-efe gị maka obi ụtọ gị n'ime anyị. Ọnụnọ gị na Nna nke Mmụọ na-enye ndụ na akụ na ụba na anyị n'ụzọ ime mmụọ, na ngọzi ebighi ebi. Anyị na-ekele gị maka ekpere gị maka anyị; anyị na-ebi site na ịrịọchite ọnụ gị.
Gịnị ka nchedo anyị na aha Nna pụtara?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:42 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)